चार ठूला दलका नेताद्वारा राष्ट्रपतिसंग भेट - BBC News नेपाली
चार ठूला दलका नेताद्वारा राष्ट्रपतिसंग भेट
Image caption प्रचण्डले भेटघाट शान्ति र संविधानका कुरामा केन्द्रित भएको बताए
केही घण्टाको फरकमा चार सबभन्दा ठूला दलका नेताहरुले राष्ट्रपति रामवरण यादवसंग शीतल निवासमा लगालग भेट गरेका थिए।
खासगरी अलपत्र परेको शान्ति र संविधान लेखनको एजेण्डाबारे नेपाली नेताहरुसंग कुराकानी गर्न प्रभावशाली छिमेकी भारतका विदेश मन्त्री काठमाण्डौं आउनु अघिल्लो दिन यो भेटघाट भएको हो।
समयमा संविधान नलेखिए राष्ट्रपति शासनको खतरा रहेको माओवादी सहित कतिपयले औंल्याएको बेला संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार बिहान एक्कासी राष्ट्रपतिसंग भेट्न समय लिएका थिए।
उनको दलसंग केही समययता निकै चीसो सम्बन्ध रहेको ठानिएको छिमेकि भारतका विदेश मन्त्री एस एम कृष्णा काठमाण्डौं आउने अघिल्लो दिन राष्ट्रपतिसंग उनले भेट्न चाहनुलाई कतिपयले जोडेर हेरेका छन्।
सूत्रहरुका अनुसार भेटमा भारतीय विदेश मन्त्रीको भ्रमणको बेला राष्ट्रिय एकताको सन्देश जाने किसिमले व्यवहार गर्नुपर्ने बारे कुराकानी भएको थियो।
भेटपछि बाहिर सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिने क्रममा भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपतिसंगको कुराकानी शान्ति र संविधानमा मात्र केन्द्रित रहेको बताए।
“के भइरहेको छ? पार्टिले कसरी सोचेको छ? अध्यक्षको नाताले मेरो के सोचाई छ भन्ने जिज्ञासा राष्ट्रपतिले राख्नुभयो। मैले समयको दबाब धेरै भएपनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई एउटा निश्कर्षमा पुर्‍याउन हामी दृढ छौं भनें,” प्रचण्डले भने।
राष्ट्रपतिसंग नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि मंगलबारै भेटे।
सबैले आफ्ना चिन्ता र प्राथमिकताका मुद्दाहरु राष्ट्रपति समक्ष राख्नुभयो। यी दुईवटा विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिले बारम्बार प्रकट गर्नुभएको चिन्ताका बारे पनि एकखालको सहमति नेताहरुले जनाए
उनले राष्ट्रपतिसंग भेट्न सोमबार समय मिलाएको बताइएको छ।
केही घण्टाको बीचमा राष्ट्रपतिसंग भेट गर्न शीतल निवास पुगेका तेस्रा नेता नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला थिए।
चौथो ठूलो दल मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलेपनि मंगलबारै राष्ट्रपतिलाई भेटे।
सबै भेटघाटको केन्द्रमा संविधान बनाउन छोट्टिंदै गएको समयसीमा र शान्ति प्रक्रियामा छाएको सुस्तताप्रतिको चिन्ता रहेको राष्ट्रपतिका सल्लाहकारहरुले बताएका छन्।
“सबैले आफ्ना चिन्ता र प्राथमिकताका मुद्दाहरु राष्ट्रपति समक्ष राख्नुभयो। यी दुईवटा विषयलाई लिएर राष्ट्रपतिले बारम्बार प्रकट गर्नुभएको चिन्ताका बारे पनि एकखालको सहमति नेताहरुले जनाए,” राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले बताए।
उक्त चिन्ता मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको दलहरुको बैठकको पनि केन्द्रबिन्दुमा थियो।
केही समय यता संवैधानिक समितिको बैठक मुस्लिम तथा दलित समुदायको मुद्दाका कारण अवरुद्ध हुन थालेपछि प्रमुख दलहरुले त्यसको हल निकाल्न बैठक गरेका थिए।
तर त्यसले सहमतिमा अघि बढ्ने भन्ने कुरा बाहेक अरु ठोस निश्कर्ष निकाल्न सकेन।